5 mabhenefiti ekudzidza uye kushanda panguva imwe chete | Kuumbwa uye kudzidza
5 mabhenefiti ekudzidza uye kushanda panguva imwe chete
Kushanda uye kuwana mamakisi akanaka ibasa rinoda kushanda nesimba. Neichi chikonzero, kune ichi chinetso isu tinofanirwa zvakare kuwedzera imwe: iyo yekushanda panguva imwe chete yauri kudzidza degree rako. Nekudaro, pamusoro pematambudziko, iwe unogona kutarisa kune ese mabhenefiti ayo chokwadi ichi chinogadzira iwe. Ndezvipi zvakanakira kudzidza uye kushanda kamwe chete?
1 1. Kutarisira nguva
2 2. Iva nekuzviriritira
3 3 Chikamu chako
4 4. Kugadziridza kwenguva yemahara
5 5. Ita zvinangwa zvako
1. Kutarisira nguva
Mamiriro ako pachako anokudzidzisa iwe ku gonesa nguva nenzira yekuti unokwanisa kuisimudza kutora mukana iwo maminetsi ayo vamwe vadzidzi vanoona seasina basa. Iwe unokurudzira tsika yekuronga yako purogiramu nenzira yehunyanzvi; chimwe chinhu chinozokubatsira iwe mune ramangwana kana iwe ukanyanya kutarisa padanho rehunyanzvi.
Nekudzidza nekushanda panguva imwe chete, matambudziko anowanda asi kugutsikana kunowedzerawo. Ndokunge, kana iwe ukazadzisa chinangwa, iwe unowana yakawanda mufaro.
2. Iva nekuzviriritira
Uku ndiko kugutsikana kwemunhu kwakakosha kwazvo. Kugona kubhadharira zvidzidzo zvako, zvirinani muchikamu, kunokupa iwe kugutsikana kwekukwanisa kupa kune iyo mhuri yezvoupfumi. Nenzira iyi, kunetsekana kwemari kunonzwisisika kwakadzikiswa sezvo hupfumi zvakare chiri chinhu chemhando yehupenyu.
Izvi zvakare zvinokupa iwe kuzviremekedza sezvo iwe uchinge uine zviwanikwa zvakawanda kuti unakirwe netsika dzekutandara zvirongwa nekutenda kusevha yako. Iwe unoisa kuzvimiririra kwako kuita.
3 Chikamu chako
Iko mukana wekudzidza nekushanda panguva imwechete ndeyekuti urikugadzira kutangazve kunogona kuita mutsauko mu maitiro ekusarudza pamberi pevamwe vanogona kukwikwidza. Nekushanda nekudzidza panguva imwe chete, iwe zvakare unoratidza hunyanzvi hwega. Semuenzaniso, iwe uri munhu ane hunyanzvi, anogara aripo, ane chinzvimbo chekuda uye kugona kuzvibaira ... Asi zvakare, basa nekudzidziswa zvinokupa iwe yakasarudzika mubatanidzwa wedzidziso uye maitiro.
Ndokunge, iwe unenge uine zvirinani mikana yemabasa pakupera kwebasa rako sezvo iwe watanga yako wega kubatanidzwa mumusika wevashandi pamberi pevamwe.
4. Kugadziridza kwenguva yemahara
Ichokwadi kuti nekushanda uye kudzidza panguva imwechete hauzove nenguva yakawandisa yekuzorora. Nekudaro, kana iwe uine iyo yemahara nguva, iwe uchaifarira zvakanyanya zvakanyanya. Zvikuru zvekuti chaizvo iko iko iko kiyi yekudzidza kukoshesa iyo nguva. Nguva yemahara inonyanya kunakidza nekuti inoenderana nemutemo wekuedza kwekutanga. Naizvozvo, kubva pakufunga kwepfungwa, unogona kumisa simba rekudzidza kurarama mune ino nekurumbidza izvozvi.
5. Ita zvinangwa zvako
Nekushanda nekudzidza panguva imwe chete watanga a chirongwa chekuita wega izvo zvinokutendera iwe kuzadzisa yako inonyanya kukosha chinangwa izvozvi: kumberi muzvidzidzo zvako. Ndokunge, kushanda mhinduro kana zvasvika pakutora mari kuti ukwanise kutarisana nezvose zvinobviswa muhupenyu hwezvidzidzo.
Asi zvakare, tarisa chokwadi ichi mune yaro yepanyama mamiriro. Mune mamwe mazwi, iri idanho rakakosha, zvisinei, kuyananiswa kwebasa nekudzidziswa kuchave kwenguva pfupi. Uye ichi chingave chako chikuru kukurudzira kuti uenderere mberi uye kukura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Studies » Jobho Kubuda » 5 mabhenefiti ekudzidza uye kushanda panguva imwe chete
Zvipingaidzo zvishanu zvekuve muzvinabhizimusi
Nzira yekunzwa zvakanaka nezvekambani yako